Tixgelin Siinta iyo Xallinta xawaaraha
waxaa maamula 20-06-03
Ma fududa in la qorsheeyo shaashad leh hawl qabad aad u wanaagsan oo buuxinaysa shuruudaha kor lagu soo sheegay. Qorshaynta furfurnaanta, qodobbada soosocda waa in tixgaliyaa 1. Astaamaha maaddada iyo qaabab dhowr ah, cabbirkeeda iyo heerkulkeeda waqtiga dheeriga. Astaamaha jireed ee ...
Macluumaadka Caadiga ah ee Isku-darka
Waqtiga xaadirka ah, qalabka sida caadiga ah loo adeegsado ee Shiinaha waa 45 birta, 40Cr, steel ammoniated, 38CrMoAl, aluminium heerkul sare leh, iwm. 1) No. 45 steel waa mid raqiis ah oona shaqeynaya wax qabad fiican, laakiin waxay leedahay iska caabin adag, iska caabbinta dillaaca iyo gabowga iska caabin waa liidataa. Daaweynta kuleylka: Jabin iyo ...
Hordhaca qaabka iyo adeegsiga shabaqa cusub
1 、 Qaab dhismeedka iyo adeegsiga daboolka kala sooca Qaabka mashiinka kala go'idda waxaa lagu gartaa iyadoo lagu daro labo feedhka ah qeybta miskaha, oo loo qeybiyo jeebka weyn galka laba qaybood, sameynta wajiga adag ee dareeraha ah inta lagu gudajiro nidaamka mashiinka xoqidda mashiinka, taas oo ka dhigeysa dhammaan adag m ...